यहाँ तपाईं नयाँ यूट्यूब लेआउट कोशिस गर्ने पहिलो हुनुहुनेछ! | क्रिएटिव अनलाइन
यहाँ तपाईं नयाँ यूट्यूब लेआउट कोशिस गर्ने पहिलो हुनुहुनेछ!
जोस एन्जेल | | वेब डिजाइन, वस्तु
नयाँ YouTube २०१ 2017 मा आउँदैछ! र यो यो हो कि विशाल Google को सबैभन्दा उल्लेखनीय प्लेटफर्म यसको डिजाइनरहरू द्वारा नयाँ लुकको लागि छनौट गरिएको छ। यस परिवर्तनलाई प्राप्त गर्न, छवि र प्लेयरको रूपमा टिप्पणी बक्स र अन्य समाचारहरूको रूपमा साना परिवर्तनहरू का केहि वर्षहरू बितिसकेका छन्।
भिडियो प्लेटफर्म जसले हरेक दिन अरबौं हेराइ उत्पन्न गर्दछ र जसमा उनीहरूको घरमा इन्टरनेट कायम राख्ने एक तिहाई भन्दा बढी जनसंख्या रेजिष्टर्ड छ, यसको नवीकरण आवश्यक पर्‍यो। गुगल, वा यूट्यूबबाट, तिनीहरू भन्छन कि यो सफा, बेरोजगार डिजाइन हो, ताकि "यसलाई चलाउन सजिलो छ" र यसमा देखा पर्ने च्यानलहरुलाई प्रख्यात बनाउन। किनभने हो, किनभने तिनीहरू यसको योग्य छन्।
यो त्यस्तो कुरा हो जुन वर्णन गरिनु हुँदैन, YouTube दैनिक, हजारौं वा लाखौं च्यानल सक्रिय बिना, केहि पनि हुने छैन विज्ञापन मार्फत प्लेटफर्मलाई समर्थन गर्दछ। त्यसकारण उनीहरूले सोच्न सक्थे कि उनीहरूले छुनु पर्‍यो। यसलाई आफैं हेर्नका लागि पहुँचका लागि तपाईले तल जानुपर्दछ लिङ्क र हिट "YouTube मा जानुहोस्"।
1 डिजाइनमा परिवर्तनहरूको विश्लेषण
2 मोड ... गाढा!
डिजाइनमा परिवर्तनहरूको विश्लेषण
कोष: यो नयाँ YouTube डिजाइनमा धेरै परिवर्तनहरू छन्। ती मध्ये एक र तपाईं प्रवेश गर्ने बित्तिकै उल्लेखनीय, रंग हो। यसमा पृष्ठभूमिमा खैरो राख्नु अघि (R: 241 G: 241 B: 241) यसलाई समावेश भएको ब्लकहरू भन्दा फरक पार्न। अब तिनीहरूले तिनीहरूलाई हटाउने र एकल रंग र त्यसकारण वेबमा फ्ल्याट आकार छोड्ने निर्णय गरे। न्यूनतम र स्वच्छताको भावनाको साथ।
आकार: दुबै डिजाइनको १००% अनुपातमा, लघुचित्रहरूको अधिक महत्त्व छ जस्तो देखिन्छ। उनीहरू अब भन्दा केहि सानो हुनेछ र अधिक अगाडि ल्याइएको देखिन्छ पहिले। केही सानो सानो रिजोलुसनको साथ धेरै आकर्षक नहुन सक्छ, जम्मा गरिएको छ। यसले पूर्ण रूपमा पर्दा कब्जा गरेको भिडियोहरूको आकार पनि परिवर्तन गर्दछ, हो, भिडियो होईन।
प्यानल: दाहिने प्यानल स्वचालित रूपमा देखा पर्नु अघि मात्र तपाईंको अन्तिम सत्रमा यो यस्तै रह्यो, अब यो सँधै देखा पर्छ। र यो हुनै पर्छ किनभने तीन तत्वहरू शीर्षमा पहिले देखा पर्‍यो: «गृह»। "प्रचलनहरू"। "सदस्यताहरू"। अब यो केवल बायाँमा प्रयोगकर्ता प्यानलमा देखा पर्दछ।
मैले यो पनि भन्नु पर्छ कि यो परिवर्तनको प्रक्रियामा छ, हुनसक्छ केही सुविधाहरू पछि देखा पर्नेछन्
प्रयोगकर्ताहरू: मैले पहिले भनेझैं उनीहरूको अनुसार प्रयोगकर्ताहरू अब यो नयाँ डिजाइनमा बढी महत्त्वपूर्ण छन्। तर, म यो त्यस्तो महसुस गर्दिन। एउटा फिचर जुन म आशा गर्दछु कि उनीहरूले थपेको थपिएको मा मा मा एक राख्नु youtuber र तपाईंको च्यानलको पूर्वावलोकन हेर्नुहोस्। तपाईंको प्रोफाइल र पृष्ठभूमि छवि को रूपमा, ग्राहकहरू र तपाईंको अतिरिक्त जानकारी।
थप जानकारी बाकस: यहाँ एक धेरै उल्लेखनीय परिवर्तन छ, र यो यो हो कि यदि तपाईंले भिडियोको निर्माता (भिडियो क्लिपहरूको मामलामा) को निर्माण गर्ने वा भाग लिने व्यक्तिलाई राम्रोसँग निर्दिष्ट गर्नुभयो भने, यो अब लिखित साधारण जस्तो देखिनेछैन। लेखक। अब यो अधिक पेशेवर र व्यवस्थित देखिन्छ। यो त्यस्तो चीज हो जुन मलाई चाहिन्छ र यो एकदम सहि देखिन्छ।
मोड ... गाढा!
नयाँ समयको नजिक जानको लागि डिजाइनमा परिमार्जन भन्दा बढि, अँध्यारो मोड पूर्ण रूपमा अलग सुविधा हो। धेरैको इच्छा साँचो भएको छ। कहिलेकाँही हामी परिस्थितिमा हुन्छौं कि सेतो रंगले अन्य मानिसहरूलाई वा आफैंलाई दु: ख दिन सक्छ। यसैले कालो मोड आवश्यक थियो।
सबैले यसलाई देख्दैनन्, म एक उदाहरण दिन्छु: कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं रातमा रेल वा बसमा जाँदै हुनुहुन्छ र त्यहाँ धेरै मानिसहरू निदाइरहेका छन्। यदि तपाईंसँग कालो मोड छ भने, तपाईंको ल्यापटपले प्रतिबिम्बित गर्ने प्रकाश कालोमा यस्तो हडताल हुनेछैन जस्तो कि तपाईंले सेतोमा बोक्नुभयो। यो यस्तो प्रकारको अवस्थाहरूमा हुन्छ जहाँ यो उपयोगी छ। र धेरै पक्कै यसको प्रशंसा हुनेछ।
यसलाई अँध्यारो मोडमा परिवर्तन गर्नको लागि, नयाँ प्रयोगकर्ता प्यानलमा जानुहोस् जुन YouTube ले तपाईंको लागि तयार पारेको छ। जहाँ तपाईं केवल प्रयोगकर्ता परिवर्तन र लग आउट गर्न सक्नुहुन्थ्यो, अब तपाईं अधिक गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै कालो मोड, भाषा वा प्रतिबन्धित पहुँच, अन्यहरू। त्यहाँ तपाईं विकल्प 'डार्क मोड: होईन' देख्नुहुनेछ र यसलाई होमा परिवर्तन गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस् कि यदि तपाईंले आफ्नो कम्प्युटर वा तपाईंको ब्राउजर परिवर्तन गर्नुभयो भने, तपाईंले फेरि गाढा मोड सक्रिय गर्नुपर्नेछ।
यूट्यूबबाट अहिले परिवर्तन गर्नका लागि पर्याप्त कारणहरू छन् र नयाँ समाचारहरू फेला पार्न प्लेटफर्मको सबै कुनाहरू हटाउनुहोस्, तपाई केको लागि प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » वेब डिजाइन » यहाँ तपाईं नयाँ यूट्यूब लेआउट कोशिस गर्ने पहिलो हुनुहुनेछ!
फ्रन्टएन्ड विकास: कोडपेन वा उदात्त पाठ?
हास्य सान्स टाइपोग्राफीलाई किन यति घृणा गरिन्छ?